BQ waxay iibisay 1,1 milyan oo taleefanno casri ah 2017 | Androidsis
BQ waa sumadda taleefanka Isbaanishka ee ugu caansan suuqa. Taasi waa wax laga wada hadlay waqtiyadii hore. Hadda, shirkaddu waxay daabacdaa xogta iibkeeda sannadkii hore. Markaa waxaan xaqiijin karnaa in guushan ay dhab tahay, maadaama Waxay sannadka ku xireen tirooyin iibsi oo lagu qanco taasi waxay gacan ka geysaneysaa in hore loo sii wado ganacsiga.
Dakhliga shirkaddu wuxuu marayaa 190 milyan oo euro waxayna heleen macaash dhan 8,5 milyan oo yuuro. Dalka Isbaanishka, BQ waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee wax-soo-iibinta ugu fiican suuqa. Waxay ku guuleysteen inay helaan saami dhan 10,3%. Shaki la'aan, natiijooyin aad u wanaagsan shirkadda.
Iibinta shirkadu way wanaagsan tahay, wax badan ma kordhin marka loo eego sanadihii hore. BQ waxay iibisay 1,1 milyan oo taleefanno casri ah sannadkii la soo dhaafay. Waxay ka sarreeyaan 2015, inkasta oo aan la ogeyn inta ay iibiyeen sannadkii hore, sababtoo ah lama soo saarin tirooyinka iibka.
Natiijooyinkani waxay ahaayeen muhiim, tan iyo dhowr sano ka hor BQ ma aysan soo marin waqtigeedii ugu fiicnaa. Dhab ahaantii, waxay ku qasbanaadeen dab ka qaad qayb ka mid ah shaqaalahaaga. Laakiin waxay u muuqataa in dib -u -habaynta ay caawisay shirkadda. Markaa waxay awoodeen inay macaash sameeyaan. Isbeddel ay rajaynayaan inay sii hayaan sannadkan.
Sannadkii 2017 waxay doorteen istaraatijiyad muxaafid ah, qaadashada khataro yar marka loo eego naqshadaha. Wax ka caawiyay inay suuqa joogaan. Markaa sannadkan waxaa laga yaabaa inay sharad badan ku bixiyaan ballaarinta iyo la yaabka moodooyinka cusub.
BQ waxay leedahay caqabado dhowr ah oo horyaala 2018 oo dhan. Markaa waxay noqon doontaa wax xiiso leh in la arko sida ay shirkadu ula macaamilayso iyaga iyo haddii ay maareeyaan inay ka dhisaan booskooda suuqa. Waxaan sugeynaa inaan maqalno wax badan oo ku saabsan qorshayaashaada toddobaadyada soo socda. Waqtigan xaadirka ah waxaan horeyba u ognahay in taleefannadooda casriga ah ee ugu horreeya oo wata Android One ay imaan doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » BQ waxay iibisay 1,1 milyan oo taleefannada casriga ah sanadkii hore
Marka laga hadlayo faallooyinkii ugu dambeeyay: BQ waxay horey u sii deysay aalad leh Android One gadaal 2015 (waxaan u maleynayaa inaan xasuusto). Laakiin, runtu waxay tahay, waa terminal si loo iloobo maxaa yeelay waxay heshay cusboonaysiinta Android 7.0 dhawr bilood ka hor mana aha inay aad u fiican tahay ...
Waxaan rajeyneynaa in khibradaasi kaa caawisay inaad naqshadeyso X2 iyo X2 Plus cusub si aad u hesho cusbooneysiinta OS sida ugu dhaqsaha badan.